China tsika kudhinda isina chinhu polyester inomhanya t shirt logo fekitori uye vagadziri | Chiono
Batsira boka rako kuti rirambe rakatonhora uye kumira mune ino yepamusoro mhando maitiro. Yakakwana yezvikwata zvemitambo nemasangano ari kutsvaga yemhando yepamusoro kuita kwehembe.
Aya 100% micro-polyester mapfupi sleeve anomhanya mahembe anogadzirwa kubva kune akanakisa wicking tekinoroji yekuita jira, musiyano wedivi uye ruoko ruoko mapaneru inoisa. Yakagadzirwa neako wega jira kora uye kaviri-tsono hem ine tack.
Batsira boka rako kuti rirambe rakatonhora uye kumira mune ino yepamusoro mhando maitiro. Yakakwana yezvikwata zvemitambo nemasangano ari kutsvaga yemhando yepamusoro kuita kwehembe. Iko hakuna chero munhu asingade iyi Tshirt!
Pashure: tsika yechidzitiro inodhinda pachena hapana mhando nyoro varume yakakomberedza mutsipa heather ruvara tri-musanganiswa t shirt
Varume Men Shirt
tsika kufema 100% polyester mwando wickin ...